I-Bamboo Resort kunye ne-ATV Park - I-Airbnb
I-Bamboo Resort kunye ne-ATV Park
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguPabitra
Wamkelekile kwi-Bamboo resort kunye ne-Atv park. Sifumaneka kwisithili saseDarjeeling (Bijanbari) malunga neeyure ze-2 ukusuka kwidolophu enkulu yaseDarjeeling. Njengoko negama lisitsho, yindawo yokuphumla elungele indalo kunye nendawo yokuya kubathandi bendalo. Indawo yokuphumla ijikelezwe ngokupheleleyo ziinduli eziluhlaza, igadi yeti, ihlathi elishinyeneyo kunye nomlambo. Ukuhamba usuka edolophini usiya kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide ngokwawo ngamava njengoko uza kubona umbono ongaqondakaliyo weMt Kangchenjunga kulo lonke uhambo.
Uhlobo lwendawo yokuhlala : Sinezindlu zangasese ezintathu. Enye yale ndlu inemigangatho emibini, kumgangatho ongasentla sinegumbi losapho elikwiattic enebhedi enye elingana nenkosi kunye noomatrasi abathathu abangeka kumkanikazi. Kumgangatho osezantsi sinegumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini. I-2nd cottage inegumbi elinye elineebhedi ezimbini. Indlu yesithathu inomlambo ojongene nebalcony. Inebhedi enye enye kunye ne-queen bed enye. I-matress eyongezelelweyo ingalungiselelwa. Ukuhlaliswa okupheleleyo kwezi zindlu zintathu ngabantu abayi-16-17. Ngaphandle kwezi zindlu zangasese sikwanazo neentente ezifumaneka emahlathini nasemlanjeni.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-3, 1 ibhedi elala abantu ababini
4.67 · Izimvo eziyi-4
Ngaphandle kokubona indawo yasekhaya umntu unokutyelela imarike kwidolophu yaseBijanbari emalunga ne-10 mins drive ukusuka kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide. Idolophu ekufutshane inamaziko afana nesibhedlele, ibhanki, iATM, ivenkile yonyango, iivenkile zempahla njl.njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Pabitra